अार्थिक/अर्थ – Page 97 – Karnalikhabar
कृषि बीमा कसरी गर्ने ? कति लाग्छ खर्च ? हेर्नुस्, सम्पूर्ण आवश्यकीय जानकारी
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । कृषिप्रधान देश भएपनि कृषि व्यवसाय राम्रोसँग अझै फस्टाउन सकेको छैन । तर कृषि व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्या्दित बनाउनको लागि पनि बीमा गर्न आवश्यक छ । निकै अवसर र सम्भावनाका बिचमा पनि आज कृिष पेशाप्रति
कुनै आश्चर्यजनक निर्णय नभएमा नेपालीसँग भएका पुराना पाँच सय र हजार दरका भारु नोट नसाटिने निश्चित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार साँझसम्म भारतलाई प्रतिबन्धित नोट सटहीबारे कुनै पत्राचार नगरेपछि नेपालीसँग भएको नोट
टोयोटाले एकै पटक किन फिर्ता मगायो २९ लाख कार ?
काठमाडौँ: विश्वविख्यात अटो मोबाइल कम्पनी टोयोटाले बजारमा पठाएका आफ्ना २९ लाख भन्दा धेरै कार एकसाथ फिर्ता बोलाएको छ । एयरब्यागमा खराबी आएपछि टोयोटाले विश्वभरबाट करिब २९ लाख कारलाई फिर्ता बोलाएको हो । भारतबाट मात्रै करिब २३
पुष्प मेलामा ५२ लाखको कारोबार
काठमाडौंः राजधानीका सुरु भएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय फ्लोरा एक्स्पोको तेस्रो दिन सम्ममा ५२ लाख बराबरको कारोबार भएको छ । पहिलो दिन नौ लाख १६ हजार, दोस्रो दिन १६ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो भने तेस्रोदिन २५
बिगो “१ अर्ब”, जरिवाना ४६ करोड
चैत्र १९, २०७३- एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएका चार भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ४६ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्र भ्रष्टाचार भएको ठहर्‍याएको छ । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद अनियमितता प्रकरणमा विद्युत्
राष्ट्र बैकद्धारा कृषि कर्जा कार्यबिधी २०७३ कार्यान्वनमा ल्याउन निर्देशन
हेर्नुस कार्यबिधीमा के-के छ ? काठमाडौ,१९ चैत । नेपाल राष्ट्र बैकले कृषि तथा पशुुपक्षी कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुुदान सम्वन्धी कार्यबिधी २०७३ कार्यान्वनमा ल्याउन बैक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । आज
भारतमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा भारी कटौती
नयाँदिल्ली: तेल कम्पनीहरूले शुक्रवारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा भारी कटौतीको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले पेट्रोलको मूल्यमा तीन रुपैयाँ ७७ पैसाले घटाएका छन् । त्यसैगरी डिजेलको मूल्यमा २ रुपैयाँ ९१ पैसाले
आजदेखि नेपालमा युरो ४ मापदण्डको तेल वितरण गरिने
चैत १९, २०७३ काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले शनिबारदेखि युरो-४ मापदण्डको तेल विक्री वितरण गर्ने भएको छ। सन् २००७ मा नै युरो-४ मापदण्डको इन्धनको अवधारणा आए पनि सन् २०१० मा विश्व बजारमा लागू भएङ्को थियो। युरोपियन र विकसित मुलुकमा सन्